जापानमा नेपालीको बढ्दो आत्महत्या ! कारण र रोकथामका उपाय यी हुन् – Nepal Japan
जापानमा नेपालीको बढ्दो आत्महत्या ! कारण र रोकथामका उपाय यी हुन्
नेपाल जापान २० फाल्गुन १९:१६
विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति, मानवअधिकारका मौलिक हक उपभोगको पूर्ण प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सबै पक्षमा सशक्त उपस्थिति रहेको जापान विश्वभरकै नागरिकहरुका लागि एउटा स्वप्न देश हो, जहाँ उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने र रोजगारी गरी प्रशस्त धनआर्जन गर्ने आकांक्षा जो कोहीको हुन्छ । यस्तो आकांक्षा राख्नेमा नेपालीहरुको संख्या पनि अधिक छ । जापानमा रहेका विदेशीहरुको तथ्यांकमा नेपालीको संख्या निकै धेरै छ ।
तर, जापान पुगेका नेपालीहरुमा आत्महत्या गर्ने क्रमम बढ्दो छ । केही हप्ता अघि जापानको आइचीकेनको खासुगाइ शहरमा बस्दै आएका बागलुङ ग्वालीचौरका युवा ३७ वर्षीय मधु आचार्यले आत्महत्या गरेका थिए । कुक पेशामा कार्यरत आचार्य श्रीमतीसहित जापानमा बस्दै आएका थिए ।
त्यस्तै अघिल्लो हप्ता जापानको मियाजाकी केनको मियाजाकी सहरमा बस्ने युवतीले दुधे बालिकालाई छोडेर आत्महत्याको बाटो रोजिन । श्रीमानसंगै बस्दै आएकी उनको अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेका कारण आत्मदाहको चरणमा पुगेको आशंका छ । यपि आत्महत्याको ठ्याक्कै कारण पुष्टि नभैसके पनि पारिवारिक असमझदारी नै उनले आत्हत्या गर्नुको कारण हुनसक्ने जापानमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाका ब्यक्तिहरुको बुझाई छ ।
मानिसहरुको जीवनमा घटेको कुनै अविस्मरणीय घट्नाका कारण पनि उनीहरुमा त्यसको असर परिरहेको हुन्छ । बच्चा हुँदै शारीरिक हिँसामा परेी बालिका, युद्कोद्ध अनुभव, विगतमा गरेका गल्तीहरु जस्ता घटनाको दबावबाट धेरै वर्षपछि पनि आत्महत्या गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।